I-DECA powder-Ultimate Guide Indlela yokwenza iNandrolone Decanoate (Durabolin)
/Blog/Ithala/I-DECA powder-Ultimate Guide Indlela yokwenza iNandrolone Decanoate (Durabolin)
ezaposwa ngomhla 05 / 30 / 2019 by 阿斯劳 bha liweyo Ithala.
Yintoni i Nandrolone Decanoate(DECA)
Namhlanje, abaninzi abaqulunqa umzimba bakhetha ukukhetha i-homebrew steroids ngenjongo yokwandisa ubunzima babo bomzimba. Nandrolone Decanoate, eyaziwa ngokuba yi-DECA, ithengiswa phantsi kwegama lophawu lwe-DECA-Durabolin, yenye ye-steroids enamandla enika iziphumo ezimnandi xa ibuyiselwe ekhaya. Ukuba umtsha kolu shishino, usenokuzibuza ukuba yintoni iDecabol Durabolin kwaye inokwenza ntoni kuwe. Nazi ezinye zeempawu zeNandrolone Decanoate (DECA) eziyibeka ngokwahlukileyo kwezinye.
Nandrolone Decanoate (DECA) yi-steroid esebenza kancinci, kwaye oku kuyenza ukuba ithandwe ngakumbi. Luyintoni uncedo lokusebenzisa kancinci isteroid? Sekude isiqingatha sobomi, kuya kuthatha ixesha elide ukuba i-steroid ishiye umzimba. Kwakhona, oku kuthetha ukuba idosi yeNandrolone Decanoate akufuneki ibekho rhoqo. Kuya kufuneka ufumane inaliti emva kweeveki ezintathu, ngokungafaniyo nabanye ekuya kufuneka ukuba ufumane i-jab ngeveki.
I-Nandrolone Decanoate (DECA) (360-70-3) ikwabonakaliswa nemiphumo embalwa engaphantsi, okwenza kube yintando kulabo abathanda ukunyamekela impilo yabo. Imiphumo engaphantsi kwemibi kukuba ingabonakali ukuguqula kwi-estrogen.
Iziphumo ze I-Nandrolone Decanoate ekwakheni umzimba
-Intsholongwane yempilo ehlangeneyo
-Kwandisa ubunzima obuyinyameko
Ngaba wabuya ejimini kwaye awukwazi ukwenza nayiphi na into eyenziwa ngenxa yokukhathala ekubeni umsebenzi wakho wokugqibela uphume? Emva kokusetyenziswa kweNandrolone Decanoate, uya kuphawula ukuba unako ukubuyisela kwisenzo esithile esidlulileyo kwaye uyakwazi ukwenza ixesha elizayo ngakumbi.
Ukuphucula impilo ehlangeneyo
Akukho zintlungu zidibeneyo kunye nokusetyenziswa kweNandrolone Decanoate kuba iqinisekisa ukuba bahlala bephilile.
Ngaphandle kwamandla alaneleyo, iinjongo zakho zokwakha umzimba zingaba zilize. Ngakolunye uhlangothi, ukuba unamandla, unako ukuphakamisa izisindo ezinkulu ngoko ufumana ubunzima obukhulu. I-Nandrolone Decanoate powder ukwandisa amandla akho, kukuvumela ukuba uhlawule iisisindo kumandla angqongqo.
Ukwandisa ubunzima bomzimba obusondayo
Nandrolone Decanoate Unamandla okwakha izihlunu, kwaye into entle kukuba yongeza kuphela isisu esifutshane bunzima.
Ngaba kufuneka wenze ukuba umsebenzi wakho uphawule? Ukusetyenziswa kweNandrolone Decanoate kuya kunceda ekwenzeni iiseshini zakho zokuzivocavoca zivelise ngakumbi, kukukwenza ufezekise umzimba onqwenela ngawo ngexesha elifutshane.
Indlela yokwenza iNandrolone Decanoate (DECA)
Inyathelo 1: Gqiba i-Nandrolone Decanoate powder kwi-beaker.
Inyathelo 2: Yongeza i-BA kunye ne-BB.
Inyathelo 3: Iisombululo ziqala ukuchithwa kwipoda. Gquba umxube ngobumnene ukukhawulezisa inkqubo.
Inyathelo 4: Yongeza ioli yeSesame kwisisombululo uze uyiqhube kakuhle.
Inyathelo 5: Dweba isisombululo esichukumisayo kwisirinji esiya kusetyenziswa ukucoca kunye nokufakela inaliti kwisihlungi sesirinji.
Isinyathelo 6: Caphula isitya
Iikhemikhali ofuna ukuzilungiselela
I-Nandrolone Decanoate Recipe ye-DECA 50ml nganye kwi-200mg / ml
I-32.50ml i-oil yeesame (Gwema amafutha amaninzi kunye nalawo unokuba yinto yokugula).
2.5 Utywala obunxilisayo 5% (Ungadluli i-5% BA nayiphi na inguqulelo oyenzayo)
Izibilini zangaphambili ezinamanzi
Iifayile zeSIRNUMX micron
Izikhokelo zenyathelo ngesinyathelo malunga nendlela yokwenza i-Nandrolone Decanoate
Inyathelo 1: Linganisa i-Nandrolone Decanoate powder kwi-beaker.
Oko kwenziwa ngokuthatha isiqephu sephepha, ukubeka kwisikali kunye nokunyanzela ukunyusa ukuba isisindo sephepha asifumaneki xa ulinganisa i powder yakho. Yongeza i-powder yakho bit by bit ukuze ungagcini ukuqhubeka uhlehlisa emva kokugqithisa ubunzima bakho bepowder. Ukuqinisekisa ukuba uchanekile, fumana isilinganisi esilungileyo ngokwaneleyo kwigram. Emva kokuba ufumana ama-gram ayishumi, ulungele ukuhamba.
Inyathelo 3: Iisombululo ziqala ukutshatyalaliswa kwi powder. Gquba umxube ngobumnene ukukhawulezisa inkqubo.
Unokukhetha ukufudumala isisombululo usebenzisa ibhati lokuhambisa amanzi ukuze wenze ngokukhawuleza. Uyenza njani loo nto? Thatha ibhokhwe ngamanzi kwaye uyibeke kwisitofu ukuze ushushu. Fumana i-beaker equkethe isisombululo uze uyibeke ngamasentimitha ambalwa emanzini. Ungasebenzisa kwakhona amanzi afudumele kwi-kettle. Gwema amanzi ashisayo kakhulu kuba iya kubakhokelela kwi-oxidation ke iphazamise inkqubo.
Ioli yeSesame kufuneka ibe nokushisa okufanayo kunye nesisombululo sokuvumela isisombululo sihambe kakuhle. Hlola nayiphi na i-hormone swirls engayenza kwaye iqinisekise ukuba akukho nanye ngaphambi kokuba uhambele kwinkqubo yokucoca.
Inyathelo 5: Yenza isisombululo eshushu ungene kwisirinji eya kusetyenziswa ukucoca kunye nokufakela inaliti kwisihlungi sesirinji.
Sebenzisa uxinzelelo kwi-syringe ukuvumela isisombululo ukuhamba kwaye ufake indawo yecrafti ngokutsha xa uqaphela ukuba inkqubo iya kuphuza.
Inyathelo 6: Capha isitya
Xa usuyenziwe ngenkqubo yokucoca, isisombululo ngoku sekulungele ukusetshenziswa. Ukuthwala isitya ukuphepha ukungcola.
Xa kuziwa ekuthatheni i-steroids, zimbini iintlobo zabantu; abo bathenga iNandrolone Decanoate bayathengiswa kwaye abo bakhetha ukuyipheka ekhaya kwiNandrolone Decanoate eluhlaza. Ekusebenziseni zombini, inye kuphela injongo; ukwenza umzimba ojongeka ngcono.
Kwimeko apho unokukhetha ukwenziwa kwe-steroid ngokwakho ekhaya, kuya kufuneka ubuncinci uzame ukuyenza ngendlela elungileyo. Ngokulandela iresiphi yeNandrolone Decanoate enikezwe indlela yokwenza iDaa, uya kufumana iziphumo ezigqibeleleyo. Ukugqithisa okanye ukusebenzisa isixa esincinci se-solvents okanye I-Nandrolone Decanoate powder inokuchaphazela umgangatho we-steroid yakho.
Kuyinyani, ngezixhobo ezifanelekileyo kunye nezithako, unokuhlala kakuhle ekhaya uNandrolone Decanoate kwaye uqaphele amandla akho okwakha umzimba.
I-Nandrolone Decanoate, iGJ Blokdijk, i-CreateSpace Independent Publishing Platform, i-2018, iphepha 1-170
Anabolic Steroids kunye ne-Athlete- 2d ed, uWilliam N. Taylor. , Iphepha 39
Iziyobisi, Abadlali, kunye nokuSebenza kweMvelo, ehleliwe nguJohn A. Thomas, iphepha 27-30
Uyisebenzisa kanjani iRipbololone Recipe ukudibanisa iTrenbolone Enanthate Powder	Ngaba iMK-677 (Ibutamoren) isebenza kakuhle kulwakhiwo lwezihlunu? Uphengululo Olumnandi [ENTSHA]